တောင်ကိုရီးယားအေဂျင်စီတွေနဲ့ Idol တွေကြားကချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဆက်ဆံရေးများ | News Bar Myanmar
တောင်ကိုရီးယားအေဂျင်စီတွေနဲ့ Idol တွေကြားကချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဆက်ဆံရေးများ
Kpop Idol တွေက training period တစ်လျှောက်လုံး Debut တဲ့အထိ အေဂျင်စီက CEO တွေနဲ့ အချိန်တွေအများကြီး ကုန်ဆုံးပြီး နီးနီးကပ်ကပ်ရှိကြတာမို့ စီးပွားရေးမဆန်ကြပဲ ရင်းနှီးကြပါတယ်။
အချို့ idol တွေဆို အိမ်မှာနေခဲ့တဲ့အချိန်ထက် Entertainment မှာကုန်ဆုံးခဲ့တဲ့အချိန်က ပိုတောင်များပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့်အခု Entertainment တစ်ခုချင်းစီက CEO တွေနဲ့ Idol တွေကြားက နွေးထွေးတဲ့ဆက်ဆံရေးကို သိသာစေတဲ့ အချက်တွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ပုံထဲမှာတော့ Twice က Dahyun နဲ့ JYP ရဲ့ CEO Park Jin Young တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ conversation လေးပါ။ သူတို့ပြောနေကြတာက Dahyun ကသူမရဲ့ချစ်စရာပုံစံ Emoticon လေးကို JYP ဆီပို့ထားတာကို JYP ကလည်း သူချစ်စရာပုံစံလုပ်နေတဲ့ပုံကိုပြန်ပို့ပြီး “ငါ့မှာလည်း အဲဒါမျိုးရှိတယ်’ ဆိုပြီး reply ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ CEO နဲ့ဆက်ဆံရတာ JYP Entertainment ကသူတွေအတွက်တော့ ကံကောင်းတဲ့ကိစ္စပါပဲ။
Red Velvet ရဲ့ အငယ်ဆုံးအဖွဲ့ဝင်လေး Yeri ဆို SM က Lee Soo Man ရဲ့နွေးထွေးမှုကိုအသိအမှတ်ပြုပြီး instagram မှာတောင် တင်ခဲ့ပါတယ်။ သူမတို့အဖွဲ့ရဲ့ live session ဖျော်ဖြေမှု ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ Lee Soo Man ဆီကအားပေးစာအရှည်ကြီးရခဲ့ပြီး စာနောက်မှာ “အားတင်းထား” ဆိုပြီး အားပေးခဲ့တာမို့ ပင်ပန်းခဲ့ပေမယ့် တကယ်အားတက်ခဲ့ရပါတယ်တဲ့။
Big Hit မှာတော့အရင်ကတည်းက idol တွေနဲ့ staff တွေက မိသားစုဆန်တာမို့ အထူးတလည်ပြောနေစရာတောင်မလိုပါဘူး။ ပုံထဲမှာက CEO Bang Shi Hyuk နဲ့ BTS’s Jin တို့ရဲ့ Conversation လေးဖြစ်ပြီး CEO က “ပျော်နေတာလား?” လို့မေးတာကို “ပျော်နေတာပေါ့ ကျွန်တော်ကချောတာကိုး” ဆိုပြီးပြန်စနေတာပါ။
Worldwide Handsome တို့ကတော့လေ။ နောက်ပိုင်းမှာ အလုပ်အကြောင်းပြောခဲ့ကြပြီး စာပို့ရင် emoticon လေးတွေ အများကြီးသုံးတဲ့အချက်က ရင်းနှီးကြတဲ့သဘောကို သိသာစေပါတယ်နော်။
INFINITE တို့ Lovelyz တို့ရဲ့ အေဂျင်စီဖြစ်တဲ့ Woolim Entertainment က CEO ကလည်းသဘောကောင်းမယ့် ပုံပါပဲနော်။ ပုံထဲက converstaion လေးက CEO Lee Jung Yeop က INFINITE’s Woohyun ကိုမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးတဲ့ပုံလေးပါ။
“Happy Birthday ပါ။ အမြဲအလုပ်ကြိုးစားပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီနေ့မွေးနေ့မှာ အတူတူမရှိပေးနိုင်လို့ sorry ပါ။ လိုချင်တာရှိလည်း ပြောဦး။ အမြဲတူတူနေသွားကြမယ်” ဆိုပြီး ကြင်ကြင်နာနာ ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ လိုချင်တာဝယ်ပေးမယ့် သဘောကောင်းတဲ့ သူဌေးပဲနော်။
Yang Hyun Suk ကလည်း သူနဲ့ Blackpink ရဲ့ conversation ကိုတစ်ခါက instagram မှာတင်ပေးဖူးပြီး အဲဒီ conversation လေးက ရင်းနှီးပြီး နွေးထွေးလို့ ပရိတ်သတ်တွေကြားမှာရေပန်းစားခဲ့ပါသေးတယ်။ ပုံထဲက Conversation လေးက ဒီအတိုင်းပါ။
YG : choreography ကိုလေ့ကျင့်ဖို့အချိန်တွေအများကြီးမရတော့ဘူးနော်။ တနင်္လာနေ့လည်း schedule ကပြည့်နေပြီဆိုတော့ ဒီနေ့နဲ့မနက်ဖြန်ကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်ထားပါ။ အင်္ဂါကျရင် Lisa ကလွဲပြီး practice ကိုစောစောလာခဲ့ကြဦး။ Lisa က schedule ပြီးမှလာမှာ။
Jennie : လည်ချောင်းနာတာ သက်သာလား?
Jisoo : အချိန်မီလာခဲ့ပါမယ်။ နေကောင်းအောင်နေပါ။
Rosè : ok ပါ။ နေကောင်းအောင်သာနေပါ။ အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါမယ်။
(ဒီနေရာမှာ rosè က ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ yeonshim ဆိုပြီးလူနာမည်လိုမျိုး မှား type လိုက်မိပါတယ်။)
YG : Yeomshim ကဘယ်သူလဲ? member အသစ်လား?
Rosè က မှား type မိတာကိုလို့ပြောပြီး မဲ့နေတဲ့ emoji လေးသုံးခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခြား အဖွဲ့ဝင်တွေကလည်း ရယ်နေတဲ့ပုံလေးတွေအသီးသီးပြန်ပို့ခဲ့ကြပြီး YG ကနောက်ဆုံးမှာ အများကြီးပင်ပန်းခဲ့ပြီးပြီမို့ကောင်းကောင်းလုပ်ကြဆိုပြီး အားပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီ conversation လေးကိုကြည့်တာနဲ့တင် CEO နဲ့ idol တွေပေမယ့် အလုပ်သဘောပဲမဟုတ်ပဲ ကျန်းမာရေးကအစ ဂရုစိုက်ပေးတာသိသာပါတယ်။
Next အကြမ်းစား အနမ်းခန်းတွေနဲ့ အလန်းဇားလေးတွေ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ Korea ဇာတ်လမ်းတွဲများ »
Previous « KPoP ပရိတ်သတ်တွေ စိတ်ဝင်စားခြင်းခံနေရတဲ့ EXO အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ မောင်နှမအရင်းအချာများ